C/raxmaan Jeylaani oo Indhaha loo fiiqay iyo Xil Dhuxulow oo caawiyey ardeygaasi (Sawirro) – Radio Muqdisho
C/raxmaan Jeylaani oo Indhaha loo fiiqay iyo Xil Dhuxulow oo caawiyey ardeygaasi (Sawirro)
Cabdiraxmaan Jeylaani, waa wiil ardey ah oo arag la’aan ahaa, waxa uu wax ka bartaa dugsiga Al-Bashiir ee ardeyda arag la’aanta ah, da’diisu waa 15 sano jir, Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow oo ah Mudane ka tirsan Barlamaanka Soomaaliya, ayaa gacan buuxda ka geystay in isbitaal la geeyo si loo fuliyo rajo laga qabay in aragtidiisa dib loo soo celin karo.
Maalintii Sabtiga aroortii ayaa la geeyay Isbitaalka weyn ee Ex Digfeer ee ay gacanta ku hayaan Dhaqaatiirka Turkiga si loo fuliyo Qalniin xagga Indhaha ah oo lagu sameynayey, waxaana la fuliyey Qalniinkaasi, xiligaas oo ay masuuliyaddiisa iyo xaaladdiisuba uu si dhow ula socday Xildhibaan Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow oo waqtigiisa ugu badan arrintaan ka bixiyey laba maalmood oo buuxda.
Hal maalin kaddib markii la fuliyey Qalniin Indha Fiiqis ah oo mid ka mid ah Indhaha Cabdiraxmaan Jeylaani lagu sameeyey, ayuu xildhibaan Mustafa oo uu la socdo Abuukar Cawaale Qaad-diid ku booqdey Isbitaalka si xaaladiisa loo soo eego dhaqaatiirtuna ay u kala caddeeyaan Natiijada Qalniinka lagu sameeyey Wiilkaan.
Markii aan tagnay Isbitaalka Xildhibaanka iyo dadkii la socday waxaa warbixin siiyey Dhaqaatiirta Isbitaalka Ordugan ee magaalada Muqdisho iyo maamullaha Iskuulka Ardeyda aragga la’ ay dhigtaan, waxa ay muujiyeen dhammaantood rajo aad u wanaagsan, maadaama lagu sameeyey qalniin mid ka mid ah Indhaha Ardeygaasi.
Cabdiraxmaan Jeylaani, ayaa tijaabooyinka lagu sameeyey ee ahaa in uu dareemi karo muuqaallada dadka iyo halka uu ku sugan yahay, ayuu sheegay in markii ugu horreysa uu dareemay in uu wax uu arki karo, dhaqaatiituna waxa ay sheegeen in maalmaha soo socda la rajeynayo in si toos ah wax u arko.
Xildhibaan Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow a ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay ka qeyb-qaataan caawimaadda dadka sidan oo kale uu dhibaateysan.
Maamulaha dugsiga ardeyda aragga la’ ee Al-Basiir Abiikar Xuseen Bashiir, ayaa nooga sheekeeyey sida ay kusoo bilaabaatay arrinta la xiriirta in laba ardey Indhaha loo fiiqi karo.
waxa uu yiri “Runtii, waxaa jirtay in uu na soo booqdey Xildhibaan Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow, waxaan is dhaafsanay arrimo badan, waxaan isla garanay in baaritaan la marsiiyo laba ka mid ah ardeyda oo la ogaadey in xaaladooda wax laga qaban karo, sidaad u jeedaan waxaa qalniinka lagu horumariyey Cabdiraxmaan Jeylaani Mayee oo 15 jir ah, waxaa la qalay shalay Alxamdulillaah, waxaan rajeyneynaa in maalmaha soo socda uu araggiisa si fuul ah u helo”.
Sidoo kale Abiikar Xuseen Bashiir ayaa tilmaamay in Maxamed Xasan uu yahay wiil isagana arag la’aan ah, maalmaha soo socdana lagu sameyn doono Qalniin indha Fiiqis ah, waxa uu u mahadceliyey Xildhibaan Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow.
Waxaa isagana ku xigi doona Maxamed Xasan oo ah ardey 11,sano jira kaasoo ku xigi doona qalniinka labaad, marka sidaa daraadeed waxaan halkaan mahadcelin uga soo jeediyanayaa Wasiirkii hore ee Warfaafinta ahna xildhibaan ka tirsan Barlamaanka Soomaaliya iyo asxaabtiisa, waxaan rajeyneynaa in maalmaha soo socda in aan aragno Cabdiraxmaan oo wax arki kara, waxaan u mahadcelinayaa qof walba oo arrintaas niyadda uga duceeyey”.
13-kii Bishan ayuu booqasho dhiiragelin ah ku tagay Xildhibaan Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow, dugsiga ardeyda aragga la’ ee Al-Basiir, waxa uuna dhiirageliyey in la fuliyo Qalniinka indha Fiiqista ah ee ay u baahnaayen laba ardey oo la ogaadey in wax laga qaban karo, waxaana rajada laga qabo ay tahay howshaan mid aad u wanaagsan, waana waajib u wada yaalla Shacabka oo dhan.
Wasiirka Caafimaadka Soomaaliya oo Madaxda dalka Shiinaha kala hadashay wax u qabashada Soomaaliya “SAWIRRO”
Maamulka Koonfur galbeed ee Soomaaliya oo dib u howlgeliyay garoonka N0 50 “SAWIRRO”